Thola umqashi ezinhle futhi inkampani umsebenzi akulula kangako. Ngokuvamile kudingeka isikhathi eside ukuba ngifunde ngemibono izicelo nabasebenzi akhona boss ethile. Asiza iphawule ezingaba ezifihliwe okuthiwa umsebenzi izingibe. Phela, bacashi bavamise umane ukusebenzisa uhlelo ezinye ukuyengela abasebenzi abasha. Ngokuvamile, lezi zindlela kungukuthi ephelezelwa ukwethembeka, konke lokhu kwenziwa kuphela ukuze kuzuze bona. Ngakho ngiba impendulo ezinhle kusukela abasebenzi ukufunda. "Red & White" - esitolo, okuyinto sizobe ukuchaza kulesi sihloko. Bazokusiza uqonde ukuthi ungalethemba inhlangano nalokho lezimanga ezimele nathi emva umsebenzi. Mhlawumbe kungcono ukuhlala kude inkampani?
Okokuqala, amazwi ambalwa mayelana nemisebenzi ale Nhlangano. Abaningi kubalulekile ukwazi kulokho endaweni bayobizwa ukusebenza. Kusuke kufanele kube njalo. Lapha nge esitolo "Red & White" kucacile. Kuyinto imfihlo ukuthi kumele abhekane nenhlangano ukuhweba. It is waziphatha ukudayiswa uphuzo oludakayo kulo lonke elaseRussia. Singasho ukuthi lena lwezitolo lapho ungakwazi ukuthenga elite (hhayi kuphela) ka esezingeni utshwala. Ngenxa yalesi "Red & White" has okubuyayo kusukela abasebenzi. Akukho ukungaqondani ngenxa imisebenzi. Kungenzeka kudingeke nje adayise abantu izimpahla. Futhi into ekhethekile.
Yeka amathemba ungabona ngokwakho kwemisebenzi corporation? Okunhlobonhlobo. Hhayi okuningi kakhulu, yebo, kodwa ukukhetha etholakalayo ngokushesha. Abafakizicelo uqaphele ukuthi iningi umsebenzi isimemo:
Ukuze tebuholi akudingeki ufanelekele, ngokuvamile umatasa. Noma kunjalo, abanye amathuba ama-career etholakalayo. Ngokwesibonelo, ungakwazi abe abaphezulu umphathi yokuthengisa noma ophethe kulowo mnyango. Kodwa-ke kuzodingeka uzame angabacwasi. Ngokuphathelene umsebenzi amaphosta ungathola impendulo ezinhle kusukela abasebenzi. "Red & White" akusho akhohlise izimbangi zayo, njengoba ukwenza ezinye abaqashi. Ngeke bazi kahle ukuthi yini imisebenzi ukuze kwenziwe. Ngakho sekuyisikhathi ukubheka inhlangano. Vele uthathe isikhathi sakho: emihle nemibi esitolo lapho. Ngeke kufanele kucatshangelwe ngaphambi umsebenzi wakho.
Ngokukhethekile ikhokhelwa kuze inkhulumomphendvulwano kuqala phakathi kwabaqashi kanye umfakisicelo. Sikhuluma-interview. Kulesi senzakalo, impendulo ehlukahlukene kusukela abasebenzi. "Red & White" - esitolo, okuyinto ukuzuza kwabasebenzi ezinkulu. Inqubo yokuqasha senzeka ngqo ehhovisi elikhulu endaweni yakini. Yiqiniso, udinga ukuza inkampani edolobheni lakho bese utshele ke kunoma yimuphi umsebenzi (Cashier, isibonelo) ongathanda ukuthola umsebenzi. Ngeke uxhumane iziphathimandla, okuzokwenza ukukumema-inthavyu.
Isibhakabhaka ngesikhathi interview sisonke sisihle. Kodwa kunokuningi okungakhulunywanga ngakho, ikakhulukazi uma ufuna ube merchandiser, agcine isisebenzi noma wezindlu. Ngokuvamile, HR-Ochwepheshe ukukubonisa ukuthi zibaluleke kakhulu, ngobuchule futhi kangcono. Kubukwe ezinye yokwedelela, ngisho nokwedelela. Futhi ukuthi elula, abantu ngokuvamile sola "Red & White". abasebenzi Izibuyekezo esitolo angawutholi engcono. Kodwa lezi zenzakalo wayeka, uma zivela. Isimo isiyonke friendly futhi ezimnandi. Ngeke ukunivalela ngaphandle ukubambisana.
Futhi, ujabule kakhudlwana futhi ukuthi ngesikhathi interview, ungacela umphathi yekucasha yonke imibuzo yakho. Wena ngokushesha futhi ngokuningiliziwe niyikhulume bonke butholakala enqubweni eyinkimbinkimbi yokuthela umsebenzi. Ubuqotho obunjalo edonsela kuphela. Futhi lo msebenzi esenzeka izitolo ngaphansi kwegama "Red & White" ithola okubuyayo kusukela abasebenzi. Kodwa ingabe zonke kahle lapha? Ingabe kukhona amaphuzu negative?
Yiqiniso bayasidinga. Kodwa okokuqala, kufanele sinake izinzuzo ezinikezwa yinhlangano. Bavame ukusiza ukhetha inkampani-umqashi. I lolwehlukanisa, okuyinto has a uchungechunge izitolo ngokuthi "Red and White" - esitebeleni umsebenzi schedule. Uyoba athembisa bayeke umsebenzi, okuyinto Akudingi ukucubungula. Zonke migomo nemibandela ngokucacile ebekiwe inkontileka umsebenzi. Kukhona ngisho ukuhluka lihambisana izifundo noma ukubeka phezu itoho (ngoba abafundi, isibonelo). Ngokuvamile-ke ezihlongozwayo isheduli 2/2. Kodwa singakwazi uyavuma futhi 5/2. Kuphinda ngempela.
Ingabe ukusebenza amahora angu-8. Ngomqondo onabile, akusiyo eside kakhulu - amahora evamile ukusebenza. Ngokuba abanjalo into ingafundwa impendulo ikakhulukazi emihle abasebenzi. "Red & White" - isitolo, umqashi unipha isiqinisekiso sokuthi uzobe usebenza kakhulu njengoba kubekiwe inkontileka umsebenzi. Ezingavamile wezinkampane yesimanje.
Yini ngokuvamile ngifuna izicelo? Ngokwesibonelo, ku-zikamazisi. Iholide, ilivu yokugula, esinqumweni - konke lokhu kubaluleke kakhulu kunoma yimuphi umuntu. Futhi uma sikwenza kungaxegi alinikezi izinzuzo iphakethe, Kungcono kusukela udoti. kukhononda kakhulu mayelana "Red & White" Tyumen. Impendulo evela abasebenzi ekuhlinzekweni nosizo lomphakathi lapha (kanye nakwamanye amadolobha kanye) kuxutshwe. Ngaphezu kwalokho, amazwe enze izicelo ekuqaleni wajabulela zithembiso: unikeze iphakethe ephelele, akhokhe ngesikhathi futhi ezinkulu, uma kunesidingo.
Kodwa lapha umkhuba Kuthi isithombe esehlukile. Yena neze ubani uyamangala. inkinga wukuthi isiqinisekiso social ngeke esibhedlela kuphela. Futhi izinzuzo kusadingeka silinde isikhathi eside kakhulu, kodwa noma kunjalo, uthola nabo bafane nalowaya mqulu ongaphelele. Vumelana mayelana nini isikhathi sokuphumula noma ikhokhwe ikhefu Yezisebenzi nzima. Ikakhulu iphatha ukuvikela amalungelo ngezimpelasonto ngezindleko zakhe siqu. Konke lokhu kukhomba ukwephulwa yenkontileka umsebenzi. Ikakhulukazi kulesi sici, esitolo kubi emehlweni "Red & White" Saratov. Izibuyekezo abasebenzi abathola inkampani akuyona okungcono. Futhi abasebenzi lenhlangano belulekwa: uma iphakethe yezenhlalakahle kubalulekile, kungcono ukugwema umsebenzi wenhlangano ngawe. Yebo, ngezinye izikhathi kungenzeka ukufeza ubulungisa kule ndaba, kodwa ukukwenza akulula kangako.
Futhi iphuzu elibalulekile imvelo lapho kuyodingeka isebenze. Lapha zihlukaniswe mayelana esitolo, "Red & White" lobuya abasebenzi. Ekaterinburg, Petersburg, eMoscow noma imuphi omunye umuzi - konke kuncike ekutheni uhlalaphi futhi isikhundla. Ingabe wanelisekile ngokuvamile merchandisers, kanye yokuthengisa abaphathi kanye kwabaphathi bemali. Basebenza endaweni sasivumela ukhululekile, nakuba neze. indawo wabo ezitolo bendabuko kakhulu, lapho efudumele futhi omile. Kodwa abasebenzi ka "class sesibili" has ukuba sibekezelele hhayi sipho best. Emafektri, njengoba umthetho, emakhazeni nasekuhambeni-manzi, kukhona abanye ukwephula ezempilo nezokuphepha.
Kodwa izimo ezinjalo litholakala cishe kuyo yonke inhlangano. It kuvela, ngempela nesimo nganoma yisiphi isitolo. Akunjalo eside edlule, ngahlangana nge esitolo ngokuthi "Red & White" Samara. Impendulo evela abasebenzi inhlangano ngokushesha yaqala ukuthola izincwadi exubile. Ngokuvamile, konke kuncike umsebenzi wakho. Kodwa ngokuvamile, izimo abasebenza eyamukelekayo ngokuqinile. Neze, kodwa hhayi ngempela esabekayo.
Into ebaluleke kakhulu sokwenza noma imuphi umsebenzi - kuyinkokhelo. Ukuthi umfutho esiyinhloko umsebenzi. Abaningi abazimisele ukusibekezelela isimo yokuntuleka yosizo lomphakathi, ukucubungula, cranky umsebenzi schedule nokungabi nabulungisa ikheli ukuze kutholakale inzuzo enhle. Ngeshwa, leli cebo akajabuli kakhulu ne amazwana abasebenzi. "Red & White" odlulela kude iningi izicelo usayizi umholo.
Kungani? Ngesikhathi interview uthembisa inzuzo okusezingeni eliphezulu, imiklomelo ehlukahlukene amabhonasi, ngihola kahle. Kodwa umkhuba kuvela ukuthi ngokwesilinganiso, ungathola emhlabeni izinkulungwane 10-15 ruble. Nakuba ekuqaleni ethembisa, isibonelo, 25, 000. Isimo sengqondo esinjalo sokuthanda zokungacabangi nokungathembeki ukuze abasebenzi ngempela off-ngokubeka. Eqinisweni, thina ukukopela nje ukuyengela enhlanganweni.
Sekuyisikhathi eside bajwayelane inethiwekhi ezitolo "Red & White" Ufa. Impendulo evela abasebenzi lapha, njengoba kunoma iyiphi enye nemizana, akakuthandanga lokho futhi, ngaphandle uma sikhuluma Amaholo. Abasebenzi bathi ukubambezeleka iholo, ngezinye izikhathi izinyanga eziningana. Lokhu akulona simo engcono. It kuvela ukuthi lwezitolo akuwona uzinze. Akuwona wonke umuntu usulungile sibekezelele le. Ngakho-ke, ukuthembeka enkampanini uwela. Ngenxa yalokho, abaningi akhononde "Red & White". Impendulo evela abasebenzi kwesokunxele okuningi okufanele oyifunayo.
Ngokuphawulekayo, abaningi abafuna umsebenzi avame kuqhathaniswa inkampani ebugqilini. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi labo abakwaziyo ukufunda eside ngokubambisana neNhlangano inhlangano. Yini le esikhuluma ngayo? On ubuhlobo buholi abangaphansi kwakhe.
Ngoba uthola "Red & White" lobuya abasebenzi. Moscow, isibonelo, musa njalo sihlale enelisekile lokunikeza amalungelo abasebenzi. Abaningi bathi ubulungiswa ngeke ulinde lapha. Ngaphezu izinduna okhonzile avame aphathwe njengomuntu izigqila yangempela, bahlalele ukushiya umsebenzi isikhathi esengeziwe ngaphandle inkokhelo efanele. Akubuzwa ukuthi ukuxhumana nawe ngeke nje ube ngezwi eliphakeme, kodwa futhi khukhumala okukhulu. Singasho ukuthi abaningi bayenqaba umsebenzi ngenxa yalesi sizathu. Shona ngeke cishe njalo engajabuli kuwe, ngaphandle kokunaka kahle indlela abhekana ngayo umsebenzi wabo. Ngakho ukuthi inethiwekhi ezitolo "Red & White" lobuya abasebenzi engakutholi okuqukethwe kangcono. Yini nezinye lezimanga ezimele kithi?
Ngokwesibonelo, izinhlawulo. Mhlawumbe lena yiyona ndlela isilinganiso evame kakhulu lokulawula isijeziso yabasebenzi corporations. Ngenxa-ke ungathola izimpendulo thukuthele lwabasebenzi. "Red & White 'lisenza sicabange ukhetho eziningi emisebenzi. Phela, abazange kanye wezwa ukuthi isigwebo lapha unomphela. Futhi ngaleso izaba kancane, ngisho ngaphandle kwalo: ngokuzikhethela ukuphathwa. Zonke izimali ezibanjwayo ezenziwe kusukela iholo, yebo. Ujezisa ukoniwa (ngisho yasungulwa) bonke shift yakho. Akunandaba ukuthi ubani-ke wenza iphutha. Yebo, akufanele, kodwa lezo imithetho. Kuphakathi ukubhekana naso, noma nginqabe umsebenzi.
Isijeziso uhlelo eklanyelwe trifles. Kanye nezimali ezibanjwayo uma ke zinkulu. Ngokuvamile ongakwenza ukuhlala ngaphandle abahola ngemva missteps eziningana. Into esishukumisela ukuba senze umsebenzi iphele. Yingakho ukunganeliseki kanye namakhasimende, kanye nabasebenzi. Eyokuqala ungatholi ukunakekelwa efanele, kwesibili - iholo ethenjisiwe endaweni ekhululekile ukusebenza. Ngakho-ke, umsebenzi yamuva e inkampani akuyona funa ekhethekile.
Kodwa khona izitolo eziningi ezweni lonke ngenhlangano kwakhiwa imicabango yabantu emihle kuphela. Kungani? Kuyinto owaziwa okudayisa chain, okuyinto inamagatsha namahhovisi kulo lonke elaseRussia. Ngakho zibhale bonke nje akwenzi mqondo.
Uma ufuna ukuthola ikheli esiqondile esitolo endaweni yangakini, sicela usebenzise onamakhasi mcimbi. Lapha ungathola wonke amagatsha kungenzeka, kanye kubonakala kumephu emidlalweni yama-iphuzu eliseduze of ukudayiswa. A trifle, kodwa nice. Zonke ikhasimende lula!
Kuphela nje qaphela! kukhona "Contact Us" kwesigaba kwi website esemthethweni. Lapha ungabona ikheli lehhovisi e kwindlela eMoscow Pleteshkovsky, 12. uyoboniswa Kukhona indawo umnyango waseChelyabinsk: Christmas Street, 13. Amakheli amabili asetshenziswa ukuze ufunde mayelana umsebenzi amathuba emisebenzi. Kodwa bonke abanye ezitolo, kuyinto efiselekayo ukubheka ibalazwe exhumana. Ngokwesibonelo, nesifunda eMoscow ungathola "Red and White" Zelenograd (Corp. 1824.) Kanye ngqo eMoscow: Podsosensky kwindlela 3, Boulevard Krasnogvardejskiy 7a, nokunye. Uzobona konke ku i ibalazwe exhumana ifomu esilungele wena. Lapha ungakwazi ukufunda okwengeziwe ngalokho okwenza umsebenzi ezitolo ( "Red & White"). Impendulo evela abasebenzi lapha kakhulu khona.
By the way, ikhasi olusemthethweni parallel ingaphezu kanye esitolo online. Amakhasimende ziyaneliswa: awukwazi asukume lombhede kokwenza lokuthenga lomkhiqizo. Ngisho ukulethwa ekhaya kwezidingo. Leli yithuba enkulu ukuthi akuwona wonke umuntu angakwazi ukuziqhayisa izitolo yesimanje. Kodwa yilokho ukuphila akuveli lula isinqumo abasebenzi. Ngaphezu kwalokho, isicelo Inthanethi baphoqelelwe ukuba asebenze isikhathi esengeziwe isibhamu ahlale. Njengoba sekushiwo, ngaphandle umholo lowengetiwe.
Kodwa akugcini lapho. Ngemva komunye isikhashana okubi uthola esitolo "Red & White" lobuya abasebenzi. EMoscow, eSt Petersburg noma imuphi omunye umuzi lapho kukhona kule nethiwekhi, uyazi umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuthi scares eziningi. Into wukuthi, ngaphezu izinhlawulo, wena ziyophoqeleka ukuba bathenge izimpahla ukuthi adayiswa inhlangano. Futhi umyalo - kuze kufinyelele ekuxoshweni.
Yini engalungile lokho? Futhi kuyodingeka ukuthenga izimpahla yaphangalala, ngisho izindleko egcwele nomholo wakhe. Ukwala umsebenzi onecala ukuphathwa izinsongo yinto ehlukile. Kwakusongela ukuze uchithe. Noma wesaba ukuthi akusizi iholo. Ngokuhamba kukhona ngisho izindlela badlale ithonya. It kuvela ukuthi izisebenzi azinaso amalungelo. Kuphela yemfanelo nezibopho. Ukuphoqelela akwazi ukuthenga umkhiqizo aphelelwe yisikhathi okucasulayo eziningi. Ngenxa yakho konke lokhu, idumela esitolo phakathi amafemu akulona kangcono kakhulu umsebenzi.
Ngokusekelwe osekushiwo, akumangalisi ukuthi akukuhle ngalokhu abasebenzi esitolo impendulo ngaso sonke isikhathi. "Red & White" Yingakho emadolobheni ahlukahlukene ngokuvamile efakwe njengendlela uhlu lokuvimbela okuthiwa. Kuyini lokhu? Lolu uhlu ekhethekile kwezinye nemizana, okuyinto ishicilela amagama abaqashi abangathembekile. Yiqiniso, inkolelo ka wakho umbono. Cishe wonke umuzi "Red & White" zingatholakala oluvinjelwe. Lapha ungakwazi ukubona ukuthi hlobo luni izigameko futhi ngasiphi isikhathi iphutha emsebenzini. Ngakho lokhu kuwubufakazi obuqand 'ikhanda ukucabanga ngokuthi ukuze ujoyine inkampani.
Abaningi bathi leli: uma une nezinzwa ensimbi, wena ungowesilisa zonke, uzimisele ukuba sibekezelele ukubambezeleka amaholo, kanye nokungabi nabulungisa, khona-ke ungaya ngokuphepha futhi asayine inkontileka umsebenzi. Kungenjalo, kuyinto efiselekayo ukuyigwema ngazo zonke izindlela zokubambisana nenkampani. Lapha, uma ungeyena umholi akazange abanezikhundla esiphakeme, akukho buhle ungatholi ukubona emsebenzini. Kuzoba umsebenzi onzima ezitolo. "Red & White" lobuya abasebenzi lihlukile. Ngakho cabangisisa kahle ukuthi udinga ukuthenga izinkinga eziningi esikhundleni operation evamile.
Kodwa ukuze ube iklayenti ye "Red and White" Kungenzeka futhi kufanele kube. Izimpahla lapha zidayiswa ngamanani kuqhathaniswa ezingabizi, izivakashi ngokuvamile ziyaneliswa. Ngakho ukuthi isilinganiso inhlangano kubi kangaka phakathi zokudla esitolo amaketanga cha. Kunoma ikuphi, khumbula ukuthi isinqumo sokugcina uyohlale nje ngawe. Akufanele bayakholelwa izithembiso ezisuka ekuqaleni ukugcina izicelo zabo. Ukuze udinga ukuba kubaluleke kakhulu lapho divayisi "Red & White" lobuya abasebenzi. Chelyabinsk, Ufa, Petersburg, eMoscow - kungakhathaliseki ukuthi uhlala kuphi, qaphela futhi ayeveza.
Ukuhweba Retail wholesale. Isitolo esidayisa yonke impahla. Izitolo
EKemerovo - Ukuthengisela yamalahle
Imithi homeopathic "Enterokind" Baby: ukubuyekezwa, izincazelo, yokusetshenziswa
Yan Kovarzh: umsebenzi nokufeza
ULouis XIII: Biography
Inkukhu Stuffed - okusheshayo isidlo samaholide
Izidakamizwa "Bronhorus" (isiraphu): Yokusetshenziswa izingane, ukubunjwa, incazelo kanye nokubuyekeza
Tablets "Three-regolith" - isivikelo